WMFS, WMX, Window Maker, WindowLab နှင့် Xmonad: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs | Linux မှ
WMFS, WMX, Window Maker, WindowLab နှင့် Xmonad: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5
ယနေ့ငါတို့နှင့်အတူဆက်လက် ဒသမ post နှင့်နောက်ဆုံးအပေါ် Window မန်နေဂျာများ ကျန်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ့် (Windows Managers - WM, English) 5ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကနေ 50 ယခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အရေးပါသောရှုထောင့်ကိုသိ။ ပြီးအောင်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်မဖြစ်ကြသည် တက်ကြွသောစီမံကိန်းများ, Que WM အမျိုးအစား သူတို့ဘာတွေလဲ သော့ချက် features တွေနှင့် သူတို့ဘယ်လို install နေကြတယ်အခြားသူများများထဲတွင်။
ဒါဟာသတိရရကျိုးနပ်သည် လွတ်လပ်သော Window Managers စာရင်းအပြည့်အစုံ နှင့်မှီခို တစ်ဦး Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် တိကျတဲ့, ကအောက်ပါဆက်စပ်ပို့စ်တွင်တွေ့:
Window Managers - GNU / Linux အတွက် Graphical User Interfaces
နှင့်အမှု၌သင်တို့ကိုငါတို့ဖတ်ချင်တယ် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ယခင် WM ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်အောက်ပါကိုနှိပ်နိုင်သည် လင့်များ:
2BWM, 9WM, AEWM, နောက်ဆက်တွဲနှင့် Awesome ကို
BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu နှင့် Compiz
CWM, DWM, ဉာဏ်အလင်း၊ EvilWM နှင့် EXWM
Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze နှင့် Herbstluftwm
I3WM, IceWM, Ion, JWM နှင့် MatchBox
Metisse၊ Musca၊ MWM၊ OpenBox နှင့် PekWM
PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish နှင့် Spectrwm
Steamcompmgr, StumpWM, သကြား၊ SwayWM နှင့် TWM
1 Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ ၅ ခု
1.3 Window ပြုလုပ်သူ
2 အခြားလူသိများ WMs
Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ ၅ ခု
From Scratch စတိုင်လ်တွင်တီထွင်ခဲ့သောအနည်းဆုံး Tiling-type Window Manager"။
မလှုပ်မရှားစီမံကိန်းဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်ကနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှာတွေ့တယ်။
၎င်းသည်အသေးစားနှင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကို C ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး BSD လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။
၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်ဘားနှင့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများတွင်ခလုတ်များကို configure လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ICCCM နှင့် EWHM စံများနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။
"X. အတွက် Window Manager တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ WM2 ကိုအခြေခံထားတာပါ။ ဒါကြောင့်သူကအလားတူပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မူရင်း wm2 ရဲ့သွင်ပြင်အပြင်ဘက်ကသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေအတွက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုတစ်ခုပေးမှာပါ"".
တက်ကြွသောစီမံကိန်း: လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်ကနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိသည်။
Virtual Desktop အသုံးပြုမှုနှင့် Menus အသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
၎င်းသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ င်းဒိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ပွင့်လင်း၊ ပိတ်၊ အာရုံ၊ အသေးစိတ်၊ လှည့်၊ ရွှေ့၊ ဖုံးကွယ်၊
ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်၊ အောက်ပါလင့်ခ်များကိုဖွင့်ထားသည်။ link ကို 1 y link ကို 2.
“ X11 Window Manager ဟာမူလက GNUstep Desktop Environment ကိုပေါင်းစည်းမှုအထောက်အပံ့ပေးဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကသီးခြားလွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ NeXTSTEP ၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်၏ကြော့ရှင်းသည့်ခံစားမှုမျိုးကိုဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းဖြေ - ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ကမှနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော stacking style ၀ င်းဒိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် tiling စတိုင်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
၎င်းသည်ပေါ့ပါးပြီးမြန်ဆန်သည်၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူ။ အလွန်အမင်းပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ကီးဘုတ်တိုတိုဖြတ်လမ်းများကိုကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
၎င်းသည် dynamic menu entries များ၊ dockable applications များ (dockapps) နှင့်အလွယ်တကူဖတ်။ သုံးနိုင်သော configuration files များကိုအသုံးပြုသည်။
"ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူသေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ Window Manager ကို".
မလှုပ်မရှားစီမံကိန်းနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပုံစံ: Stacking ။
၎င်းတွင် ၀ င်းဒိုးများကိုအာရုံစိုက်ရန်နှိပ်ခြင်း၏မူဝါဒရှိသည်။
၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး၏အရွယ်အစားတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွင်းပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့် ၀ င်းဒိုးအရွယ်အစားညှိနှိုင်းမှုယန္တရားတစ်ခုကိုပေးထားသည်။
pointer ကို taskbar / menu နဲ့ကန့်သတ်ထားပြီး target menu ကိုအလွယ်တကူရောက်အောင်လုပ်နိူင်တယ်။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ "windowlab" အထုပ်ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။
"Haskell ၌ရေးထားသော၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောတက်ကြွသော်လည်းကြွေပြားပုံစံ X11 Window Manager ။ ပုံမှန် WM တွင်အချိန်တစ်ဝက်ခန့်ကို Windows နှင့်တန်းညှိ။ ရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် Xmonad သည်အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။".
တက်ကြွသောစီမံကိန်း: လွန်ခဲ့သော2နှစ်ကနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိသည်။
ရိုးရှင်းသောမျဉ်းကြောင်းနှင့်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြတင်းပေါက်ဖေါက်ခြင်း၊ status bar မပါ၊ ထို့အပြင် Haskell တွင်ပရိုဂရမ်ရေးသားထားသော၎င်း၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကုဒ်များကြောင့်မတော်တဆမှုကင်းကင်းအတွေ့အကြုံကိုအာမခံပေးသောကြောင့်အလွန်တည်ငြိမ်။ ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
၎င်းတွင် extensible configuration ရှိသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏တက်ကြွသောတိုးချဲ့ထားသောစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သောကြောင့် ၀ င်းဒိုးအလှဆင်မှုများ၊ status bar များနှင့် icon databases များအတွက်အထောက်အပံ့အပါအဝင်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖန်ရှင်အလုပ်များနှင့်မျက်နှာပြင်စစ်မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုကဲ့သို့သောအဓိကလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက်ပြတင်းပေါက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၏ဘုံတာ ၀ န်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အပြင်
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "xmonad"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို.
မှတ်ချက်ဖြေ - WM တစ်ခုချင်းစီရဲ့တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ဖို့သတိရပါ၊ သူတို့တွေအမြင်အာရုံတူပုံကိုသိဖို့လိုတယ်။
အပြင်က 50 Window မန်နေဂျာများ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်အတွက်ဖော်ပြပြီးသား၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသောအခြားသူများရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှအောက်ပါ ၅၀ ကိုဖော်ပြထားပါမည်။
B4 အဆင့်: http://www.b4step.com/index.html
Blanes 2000 (Blwm): လက်ရှိဒိုမိန်းမရှိပါ။
Olvwm / Owm: လက်ရှိဒိုမိန်းမရှိပါ။
Tektronix Window Manager (Tekwm): လက်ရှိဒိုမိန်းမရှိပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" နောက်လာမယ့် ၅ ခု «Gestores de Ventanas»မဆိုလွတ်လပ်သော «Entorno de Escritorio»ခေါ် WMFS, WMX, Window Maker, WindowLab နှင့် Xmonadတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » WMFS, WMX, Window Maker, WindowLab နှင့် Xmonad: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5
Forerunner - မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ပလက်ဖောင်း
Trump ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရှုံးနိမ့်သူနောက်တစ်ခုသည် AppStore မှဖယ်ရှားလိမ့်မည်